Orinasa mpanamboatra China Cambuckle Strap | SPC
Izy io dia ampiasaina amin'ny fiarovana ny entana mora entina.
- Ny elongation farany ambany amin'ny fehikibo dia mampihena ny fahafahan'ny fihenjanana indray.
- Misy 500kg, 800kgs, 1000kgs
- Fonosina ao amin'ny membrane POF miaraka amina Karatra Insert Colour sy Test Certificate.
- Fonosina anaty blister, boaty fampisehoana, fitoeran'entana, sns.
Misy karazan-tranonkala feno mifamatotra amin'ny tadiny miaraka amin'ny hetsika miverina, ergonomika miverimberina, vy tsy misy fangarony na karazana manam-pahaizana manokana momba ny ratchet buckle miampy fittings farany mety ho an'ny karazana fampiharana rehetra.
n Antoka azo antoka
Ny fitaovana sy ny fitaovana ampiasaintsika dia tsy mihena amin'ny kalitao. Ny webbing dia vita amin'ny polyester avo lenta, UV milamina ary mahatohitra asidra mineraly. Maro amin'ireo fittings farany no amboarina avy amin'ny tariby boron vy ary vita amin'ny milina fantsom-pandehanana robotic mba hahazoana antoka fa tsy miovaova ny fanamboarana.
n Mifanaraka amin'ny kalitao
Ny fonosana Ratchet dia nalaina avy amin'ireo mpanamboatra mendri-kaja izay efa niarahanay nandritra ny taona maro.
n TUV-GS voamarina
Ny rafitra rehetra nataonay dia mifanaraka amin'ny European Load Restraint Standard EN12195-2.
Item Series Stf Fahafatesana kapoka Fahaiza-mandroso
tsy misy farany Webbing
sakany halavan'ny jaigrafy Fitaovana farany
50C2000SH 1000 2000 50 4,7 + 0,3 Zinc fotsy Vinyl S Hook
50C2000NH 2000 50 5 Zinc fotsy -
25C8000SH 800 1600 25 4,7 + 0,3 Zinc fotsy Vinyl S Hook
25C8000NH 800 1600 25 5 Zinc fotsy -
25C5000SH 500 500 25 4,7 + 0,3 Zinc fotsy Vinyl S Hook
25C5000NH 500 1000 25 5 Zinc fotsy -
Teo aloha: Clove Leaf Sling
Manaraka: Ratchet Mamatotra any Eropa EN12195-2
Ny fikapohana entana SPC dia amboarina araka ny fenitra eropeana EN 12195-2. Ity fenitra ity dia mamaritra ny LC (Lashing Capacity) ao daN.
Ny fepetra takiana voalohany amin'ny fenitra EN 12195-2 dia:
- Ny hardware, izany hoe ny ratchet sy hooks, dia tsy maintsy misy fika azo antoka farafaharatsiny mba hanana 2x ny sanda LC.
- Ny fehin-kibo, tsy miova, dia tokony hanana fika fiarovana 3x farafahakeliny ny sanda LC.
- Ny rafitra fikapohana iray manontolo dia tsy maintsy manana isa tsy fahombiazana farafahakeliny indroa amin'ny sanda LC.
Fanazavana ny marika fehy fikapohana
Araka ny fenitra EN 12195-2, ny tadin'ny fihenjanana dia tsy maintsy omena marika miaraka amin'ny torolàlana hita eo aminy. Ity marika ity dia tsy maintsy apetaka amin'ny ampahany amin'ny ratchet (ny fehin-kibo izay mifatotra amin'ny ratchet) sy ny ampahany misy fihenjanana amin'ny tadin'ny fihenjanana. Ho an'ny tady fihenan'ny polyester, ny marika dia tsy maintsy manga.
Ny marika manga izay mifamatotra amin'ny tadin'ny fihenjanana dia misy fampahalalana marim-pototra sasany:
1. LC1 = Fahaizana mandringana (ho an'ny fihenjanana amin'ny tsipika mahitsy)
2. LC2 = Fahaizana mandringana (amin'ny fehikibo)
3. SHF = Herin'ny tanana mahazatra
4. STF = Herin'ny fihenjanana mahazatra
5. Karazan-tsarimihetsika amin'ny tadiny (toy ny fitsipika PES, polyester)
6. Ahinjiro isan-jaton'ny fehin-kibo (max. 7% azo avela)
7. Ny halavany (amin'ny ampahany ratchet na ny ampahany misy fihenjanana; ny ohatra dia maneho ny ampahany amin'ny ratchet)
8. S / N = laharana laharana (ny tadin'ny fikapohana mifandraika)
9. Fampitandremana: “tsy ho amin'ny fampiakarana”
10. anarana na sary famantarana an'ny mpanamboatra
11. EN 12195-2: ny fikapohana entana rehetra an'ny REMA dia vokarina amin'ny fenitra Eoropeana EN 12195-2
12. Volana / taona famokarana
Lohahevitra 1: Ahoana ny fomba hahatakarana ny fahaizan'ny Lashing
Zava-dehibe ny sanda LC.
- Ny sanda LC dia zava-dehibe fotsiny amin'ny famonoana diagonal.
- Amin'ity fomba fiarovana ity dia rafitra famafazana efatra farafaharatsiny tokony hampiasaina (sary 2).
- Ny lanjan'ny LC miaraka amina zoro kapoka mitsivalana sy ny zoro marindrano β dia zava-dehibe.
- Ny zoro fikorotanana mitsivalana α eo anelanelan'ny gorodona sy ny rafitra fikapohana dia tsy maintsy eo anelanelan'ny 20 ° sy 65 ° (sary 1).
- Ny zoro fikapohana marindrano β eo anelanelan'ny axis lava amin'ny enta-mavesatra sy ny rafitra fikapohana dia tokony ho eo anelanelan'ny 6 ° sy 55 ° (sary 2).
Lohahevitra 2: Ahoana ny fomba hahatakarana ny herin'ny fihenjanana mahazatra (Stf)
Zava-dehibe ny sanda Stf.
- Ny fomba mahazatra indrindra amin'ny fanamboarana ny enta-mavesatra dia ny fikapohana; Amin'izany fomba izany, ny enta-mavesatra dia voatsindry mafy 'mankany amin'ny gorodona (sary 3).
- Zava-dehibe amin'ity fomba famonoana ity ny habetsaky ny hery ampiasaina amin'izany, amin'ny teny hafa hoe firy ny fihenjanana azo apetraka ao amin'ny rafitra fikapohana.
- Ny LC (Lashing Capacity) dia tsy mandray anjara amin'izany, fa ny fihenjanana ny rafitra no zava-dehibe; izany dia aseho amin'ny marika REMA manga an'ny rafitra kapoka nataon'i Stf ao amin'ny daN (Hery misy fihenam-bidy).
- Ity sanda Stf ity dia refesina amin'ny Shf (Herin'ny tanana mahazatra) 50 daN.
- Ny sanda Stf dia tokony ho eo anelanelan'ny 10% sy 50% amin'ny sanda LC an'ny rafitra fikapohana (ny kalitao sy ny karazana ratchet no mamaritra azy indrindra).
- Rehefa mikapoka izy dia tsy maintsy ampiasaina ny rafitra fikapohana roa farafahakeliny, ary ny zoro α dia tokony hotehirizina arak'izay azo atao (sary 3). Ny zoro α dia tokony eo anelanelan'ny 35 ° sy 90 °.
Mihidy Ratchet Straps
Tady vy tsy misy tadiny